Wareysiga Baahida Bulshada
Sahankani wa iskaa-u buuxi iyo qarsoodi. Ka qeybqaadashadaada iyo jawaabahaaga ma saameyn doonaan waxqabadka aad CAP-HC ka hesho. Fadlan ka jawaab 45-ta suaalood kuna soo rid magacaaga, taleefonkaada, iyo lambarka boostada aad degantahay sanduuqa hoose hadii aad jeclaan lahayd in aan kugu darno fursadda baqtiyaa nasiib oo aad ku guulaysanayso mid ka mid ah afarta $25 kaar hadiyadeed. Ku guuleystayaasha waxa lala soo socodsiin doonaa asbuuca ugu horeeya ee October 2017. Mahadsanidiin.
1. Dhib inte la eg ayay ku tahay qoyskaada helitaanka daryeel caafimaad?
Dhib ma aha
2. Dhib intee la eg ayay ku tahay qoyskaada helitaanka daryeelka ilkaha?
3. Dhib intee la eg ayay ku tahay qoyskaada helitaanka daryeelka caafimaad ee dhimirka?
4. Dhib intee la eg ayay ku tahay qoyskaada heysashada lacag ku filan si ay u daboosho baahida aasaasiga ah?
5. Dhib intee la eg ayay ku tahay qoyskaada helitaanka guriyeyn amaan ah lana aboodi karo?
6. Dhib intee la eg ayay ku tahay qoyskaada bixinta daryeel ubadka?
7. Dhib intee la eg ayay tahay helitaanka daryeelka ubadka kaas oo ah mid furan xiliyada oo aad u rabto qoyskaada?
8. Dhib intee la eg ayay ku tahay qoyskaada helitaanka gaadiid?
9. Dhib intee la eg ayay ku tahay qoyskaada helitaanka ceymis gaari la aboodi karo?
10. Dhib intee la eg ayay ku tahay qoyskaada helitaanka cunto caafimaadka u roon?
11. Dhib intee la eg ayay ku tahay qoyskaada helitaanka waxbarasho sare?
12. Waa maxay shayga kaliya aadka u caawin lahaa si loo daboolo baahida kuwa ku nool gurigaada? (adiga isku dar, caruur, qoys kale ama saaxiibo)
13. Intee qaangaar ee jira 18 sanno ama ka badan, marka laguugu daro adiga, ayaa ku nool reerkaada?
14. Intee cunug oo ka yar 18 sanno ayaa ku nool reerkaada?
15. Meeqa ayaad jirtaa (sannoyin)?
16. Maxaad tahay lab/dhedig?
17. Maxuu yahay isirkaada/jinsiyadaada?
Select One Madow ama Mareykanka Afrikaanka, sida Soomaalida, Oromo, iyo dadka kale ee u dhashay Afrika Hindida Mareykanka ama Dhalladka Mareykanka Mareykanka Aasiyaanka ama Aasiyaan, sida Aasiyaanka Koofur Bari iyo dadka daggan Jasiiradda Basifigga Hisbanik/Lation Caddaan Wax kale
18. Maxay tahay luqadda inta badan looga hadlo gurigaada?
Select One Ingiriisi Hmong Isbanish Soomaali Luqad kale
19. Maxay tahay heerka ugu sareeyo waxbarashada aad dhameysay?
Select One Ka yar dugsiga sare, ma haysto diblooma ama GED Dibloomada dugsiga sare ama GED Xooggaa kulliyad, ma qaadanin shahaado Shahaadada hoose kulliyadda Shahaadada Bajlarka Shahaadada sare (mastarad, PhD, JD, MD, iwm.)
20. Maxay tahay xaaladaada shaqada iminka?
Select One Shaqeeya waqti buuxa (wuxuu iminka shaqeyaa 35+ saac halkii todobaad). Shaqada qeyb-waqtiga (wuu shaqeeya iminka in ka yar 35 saac halkii todobaad). Waxaad raadisaa shaqo (ma shaqeysid). Ma shaqeeyo iyo ma raadiyo shaqo (macnaha, hawlgab, waalid guriga jooga, itaal darran, dibadda ka ah xoogga shaqada, iwm).
21. Shirkadda aad u shaqeysid ma ku siisaa ceymiska caafimaadka?
22. Shirkadda aad u shaqeysid ma ku siisaa waqtiga fasaxa shaqaalaha qaataan?
23. Dadka ka tirsan reerkaada ma leeyihim ceymiska caafimaadka?
Select One Dhamaan dadka ku jira reerkeyga waxay iminka ku jiraan ceymis. Qaar, balse ma aha dhamaan, dadka ka tirsan reerkeyga waxay iminka qabaan ceymis. Ma jiro qof ka tirsan reerkeyga oo iminka ku jira ceymis.
24. Ma leedahay ama ma kireysataa gurigaada?
Select One Lahansho Kiro Ma lihid mana kireysatid
25. Intee ayaad bil kasta ka bixisaa gurigaada (kirada ama deynta)
26. Qofka ka tirsan reerkaada qaato inta la xoogsado iyo mushaarka (kana mid ah qofka iskiisa u shaqeysto)?
27. Qofka ka tirsan reerkaada qaato Dakhliga Sekuritiga Dheeraadka (Supplemental Security Income) (SSI; manaafacaadka itaal darrida)?
28. Qofka ka tirsan reerkaada qaato Qorshaha Maal Gelinta Qoyska Minnesota (Minnesota Family Investment Plan) (MFIP)?
29. Qofka ka tirsan reerkaada qaato Soshal Sekuriti?
30. Qofka ka tirsan reerkaada qaato Kaalmo Guud?
31. Qofka ka tirsan reerkaada qaato dhaxalka ama hawlgabnimada?
32. Qofka ka tirsan reerkaada qaato lacaga shaqo la'aanta?
33. Qofka ka tirsan reerkaada qaato Minnesota Care?
34. Qofka ka tirsan reerkaada qaato masaruufka cunugga ama taakuleynta xaaska?
35. Qofka ka tirsan reerkaada qaato Manaafacaadka ciidanka?
36. Qofka ka tirsan reerkaada qaato kaalmada Caafimaadka?
37. Qofka ka tirsan reerkaada qaato Boonada Raashinka?
38. Qofka ka tirsan reerkaada qaato Fojarka Xullashada Guriga (Section 8)?
39. Ilaha kale dakhliga ee reerkaada, caddee.
40. Ma ku talo jirtaa in aad guurtid dhowrka sanno soo socda?
41. Maxaad u rabtaa in aad guurtid?
Select One Shaqo U socda ama ka taga/dhamaysta kulliyadda Isbaddalada qoyska (caruur badan/caruurta dibadda u guurta, yareynta, furiinka, iwm.) In la joogo meel dugsiyada fiican yahiin Waxaan rabaa in aan ku noolaado meel kale oo keliya Ammaanka Tayada guriga Dhibatooyin aad kala kullantid milkiilaha hantida In aan u dhawaado qoyskeyga ama bulshada hiddaha Kirada iyo deynta aad ayay u sareysaa Canshuurta hantida aad ayay u badan tahay Asbaab kale oo la xariira maaliyadda Saba kale
42. Xagga ayaad ku talojirtaa in aad u guurtid?
Select One Meel ka mid ah gudaha Magaalada Minneapolis Meel dibadda ka ah Magaalada Minneapolis, hase ahatee weli Dagmada Hennepin Meel dibadda ka ah Dagmada Hennepin, balse weli ku taal Minnesota Goob kale
43. Magaaladee ama duleedkee Hennepin Dagmadee ayaad qorsheysatay in aad ku noolaatid?
44. Maxay tahay kooxda dakhliga aad ugu dhaw wadarta dakhliga reerkaada ka hor inta aan laga goynin canshuur sannadkii 2016 (dakhliga guud)?
Select One In ka yar $10,000 $10,000 ilaa $15,000 ka yar $15,000 ilaa $20,000 ka yar $20,000 ilaa $25,000 ka yar $25,000 ilaa $30,000 ka yar $30,000 ilaa $40,000 ka yar $40,000 ilaa $50,000 ka yar $50,000 ilaa $75,000 ka yar $75,000 ama ka badan
45. Side ku soo maqashay waxqabadkeena?
Select One Wakiilo kale Saaxiib/Qaraabo Internet Wargeys Meel kale